Articles tagged 'chienderamwano'
Ndumiso Dlodlo on cloud nine 24 October 2017 HARARE - Ndumiso Dlodlo is over the moon after clinching the overall title at the Zimbabwe National Bodybuilding and Fitness Championships at 7 Arts Theatre in Harare, at the weekend. Formerly known as the Mr Zimbabwe contest, organisers decided to change the name of the competition in order t...
The return of Chienderamwano 20 September 2017 HARARE - Three-time Mr Zimbabwe Champion “Mbewe” Chienderamwano is set to return onto the stage when he competes at next month's rebranded Zimbabwe National Bodybuilding and Fitness Championships (ZNBBFC). The contest, which is the country's premier bodybuilding competition, is set to be held ...
Big men do cry 20 October 2014 HARARE - Champion “Mbewe” Chienderamwano was overwhelmed with emotions after successfully defending his Mr Zimbabwe title on Saturday night. The Botswana-based bodybuilder dropped to the ground on his knees, hysterically punching the air while tears streamed down his cheeks after the result wa...
'Sugar' takes aim at 'Mbewe' 18 October 2014 HARARE - Isaac "Sugar" Chimuchenga says he will dethrone reigning champion, Champion “Mbewe” Chienderamwano at tonight’s Mr Zimbabwe bodybuilding contest to be held at Harare International School. Chienderamwano is the man of the moment in local bodybuilding cycles after he won both the Mr Zim...
"Mbewe" sends warning to rivals 16 October 2014 HARARE - Defending Mr Zimbabwe Champion “Mbewe” Chienderamwano says he is not really to let go of the crown he won last year. Chienderamwano is vying to make it to Mr Zimbabwe titles in a row when he defends his crown this Saturday at the contest to be held at Harare International School on Mt...
Mbewe overcomes adversity 14 October 2014 HARARE - Adversity has often followed Zimbabwe’s bodybuilder of the moment, Champion “Mbewe” Chienderamwano but this has not deterred him from sailing greater heights in the sport. On Saturday, Chienderamwano got into the local bodybuilding history books by successfully defending the Muscleman...